Momba anay - Dezhou Grand Luminous Technology Co., Ltd.
Grand Luminous naorina tamin'ny taona 2005, noho ny haitao mahery vaika ny teknolojia photoluminescence ao amin'ny Akademia Shinoa momba ny Siansa, nahatratra docking lafatra sy marina tsara izahay miaraka amin'ny CAS (Dezhou) Park Innovation CAS (Dezhou) ary University of Shandong. Mifantoka amin'ny haitao lava-pitrandrahana ny teknolojia sy ny famolavolana sy ny famolavolana sy ny famokarana sy ny famokarana.
Amin'izao fotoana izao, ny famirapiratry ny fantsom-boasary marevaka, indrindra ny vovo-javamaniry miloko mavo-mavo sy ny lanitra-manga, lasa vokatra asongadintsika sy ny vokatra mifaninana indrindra, dia efa tamin'ny ambaratonga fanta-daza eo amin'ny sehatry ny menaka maino any Sina. Ny vovony glow dia misy ny fidirana haingana, ny fotoana manjelanjelatra lava ary ny famirapiratry ny mazava luminescent. Ary ao amin'ny ilay sombin-javatra kely mitovy, ny hamafin'ny hazavana dia ny tsara indrindra. Ary ny tahan'ny fampisehoana lafo dia avo indrindra any Sina.
Tsy miramirana fotsiny ny fitaovantsika
Inona ny fitsipika FBA ataontsika?
Ho an'ny akanjonay glow, ny Feature dia manjelatra tena ao anaty maizina Ny fampiasa an-tsehatra miharihary ny aknantsika, ny fiasa an-tsokosoko mandritra ny fotoana lava ary ny toetran'ny famoahana hazavana mitohy aorian'ny fisarahana ny loharanom-pahazavana.
Midika izany fa rehefa ampiana ny vovony maivam-bolo amin'ny haingam-pandrefesana na ny vokatra manjavozavo vita amin'ny semi-vita, ny asongadin'ilay vokatra sy ny teboka no ampiana.
1, ny toetrantsika efa mandroso dia ny fampisondrotana lafo, ny vidin'ny haavo lafo no mitahiry vola.
2. Ankoatr'izay, ny hazavana famirapiratry ny akamainty misy antsika (na ny vokatra luminescent) dia tsara kokoa, mihena ny haben'ny fanampiny (na ny fampiasana) ary mihena koa ny totalin'ny vidiny.
3. mahay mifanaraka. Ny masterbatch manjelatra dia manana fahatsoram-po tsara ary mampihena ny tahan'ny fako. Ny padam-patinay luminescent horonantsary luminescent dia tena akaiky ny fampiasana ny mpampiasa endriny, namboarina manokana.
4, Mora ampiasaina ary manome ny mpanjifa vahaolana tsara indrindra.
Miampy ny fitomboan'ny fahafaha-famokarana sy ny fitohizan'ny fikarohana sy ny fivoaran'ny teknolojia photoluminescence, nihaona ireo filana samy hafa ho an'ny mpanjifa any amin'ny firenena am-polony izahay ho an'ny fiompiana fotoluminescent sy vokatra photoluminescent. Manolo-tena izahay hanome ny mpanjifa fitaovana matihanina kokoa sy mety kokoa, miaraka amin'ny fahanterana mihamiratra kokoa, hazavana mahery vaika, fampiharana mifanentana kokoa ary manome vahaolana vahaolana ho an'ny mpanjifa tetikasa luminescent.
Ny tanjonay dia ny hanome ny vokatra sy vahaolana tsara indrindra
Mihazona ny "Fahatsoram-po, manara-penitra, fahombiazana, fanavaozana" isika amin'ny maha-mpitantana antsika, manaraka ny fepetra takian'ny International Standard Organization, fitantanana hentitra, mifehy tsara ny kalitao, famatsiana ireo vokatra kilasy voalohany sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika rehetra.